सर्वश्रेष्ठ पोर्टेबल सुटकेश Turntables 2017-क्रेता गाइड - चीन 10TURNTABLES
> सर्वश्रेष्ठ पोर्टेबल सुटकेश 2017-क्रेता गाइड Turntables
सूटकेस Turntables विशिष्टता तुलना
ब्रान्ड नाम Turntable गति वक्ता सहायक इनपुट हेडफोन ज्याक बटन
Crosley CR8005A-डी एस क्रूजर3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
Crosley CR8005D-TW क्रूजर डिलक्स3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
Electrohome आर्चर विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable (EANOS300)3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
Crosley CR6019A-BR कार्यकारी Turntable3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
1byone बेल्ट-ड्राइभ 3-गति पोर्टेबल स्टेरियो Turntable	3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
Victrola Vintage 3-गति ब्लुटुथ सूटकेस Turntable3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
जेन्सेन पोर्टेबल स्टेरियो Turntable3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
ION अडियो विनाइल गति डिलक्स | पोर्टेबल 3-गति बेल्ट-ड्राइभ सूटकेस Turntable3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
Musitrend विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक पोर्टेबल सूटकेस3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
टायलर ब्लुटुथ ब्रिफकेस विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable3गति गतिशील पूर्ण सीमा स्टेरियो स्पिकर √ √ मूल्य चेक
01 • Crosley CR8005A-डी एस क्रूजर Turntable
एकाइ (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) = 4.63 x 14 x 10.5
एकाइ वजन (Lbs) = 5.5
संकुचित, सुविधाजनक र सस्तो। यी कि Crosley उत्पादित turntables वर्णन शब्दहरू छन्। अमेरिकी देखि सबै तरिका, तिनीहरूले धेरै turntable प्रशंसक को ध्यान कब्जा गरेको छ कि असाधारण उत्पादनहरु संग turntable दृश्य पुनर्जीवित गर्नुभएको छ।
सधैं कुनै पनि अन्य रुचि छैन कि एक turntable चाहन्थे? यो Crosley क्रूजर turntable विशेष डिज्नी कलाकृति आउँछ र तीन अलग गति जो तपाईं रेकर्ड सबै प्रकार सुन्न अनुमति दिन्छ मा खेल्न सक्षम छ। कि ठूलो छ? यो turntable निजी सुन्न को लागि एक हेडफोन ज्याक आउँछ। वास्तवमा, एक auxillary पोर्ट तपाईं आफ्नो प्राथमिकता अनुसार गीतहरू चयन गर्न आफ्नो फोन प्रयोग गर्न सक्षम छन् यो संगीत पनि राम्रो सुन्न बनाउँछ, को turntable मा स्थापित छ।
यसलाई सकेसम्म पोर्टेबल हुन डिजाइन गर्नुपर्छ। रंग को एक कायरता विकल्प संग, यो बाहिर मा रातो र भित्र मा पहेंलो लेपित गर्नुपर्छ। साथै, turntable आफ्नो मन र आत्मा कैद गर्न सक्षम छन् जो गतिशील पूर्ण-सीमा स्टेरियो स्पिकर आउँछ। यो turntable $ 104,95 मूल्य हो।
शुरुआती लागि ठूलो खेलाडी।
साथी वा परिवारको लागि उत्तम उपहार।
भोल्युम उत्पादन अलिकति कम छ।
02 • Crosley CR8005D-TW क्रूजर डिलक्स Turntable
Crosley अर्को मोडेल, यो अडियो कम्पनी तिनीहरूले शानदार turntables बनाउन सक्षम छन् कि समय र समय फेरि सिद्ध भएको छ। तपाईं क्लासिक पक्ष तिर थप भन्ने एक turntable खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईं को लागि मोडेल छ। खैरो मा लेपित, यो मोडेल एक पुराना नजर बन्द दिन बनेको छ।
Crosley गरेको turntables को यो मोडेल एक NP6 सुई आउँछ। परीक्षण र परीक्षण, यो सुई तपाईं एक प्रवेश स्तर turntable खोज्दै हुनुहुन्छ भने खराब छ। यो turntable तपाईंलाई ब्लुटुथ मार्फत आफ्नो फोन जडान गर्न सक्षम छन्। यो तपाईं सकेसम्म सुविधाजनक रूपमा आफ्नो मनपर्ने गीतहरू सुन्न सक्षम सुनिश्चित गर्दछ। पनि turntable एक हेडफोन ज्याक जो तपाईं निजी आफ्नो मनपर्ने धुनहरू सुन्न अनुमति दिन्छ आउँछ। यो turntable कुनै पनि रेकर्ड को RPM समायोजन गर्ने क्षमता छ र यसलाई आफ्नो सुनुवाइ लागि सबै भन्दा राम्रो अडियो प्रदर्शन delievers कि गतिशील स्टेरियो स्पिकर आउँछ।
भोल्युम उत्पादन अलिकति कम हुन सक्छ हुनत, यो उत्पादनको लागि सबै फाइदा निश्चित यसको लागि माथि बनाउँछ। यो अचम्मको देखिन्छ र बिना एउटा अचम्मको खेलाडी शङ्का। यो मोडेल $ 74,48 मा मूल्य र निश्चित यसलाई छ सुविधाहरू राशि लागि एक अविश्वसनीय सम्झौता छ।
मात्रा उत्पादन थोडा धेरै कम हुन सक्छ।
03 • Electrohome आर्चरविनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable (EANOS300)
एकाइ रंग: कालो
समाप्त: काला Textured पीवीसी
निर्माण सामाग्री: MDF क्याबिनेट (मध्यम घनत्व fiberboard)
रेकर्ड प्लेयर: हो
रेकर्ड ओटो फिर्ता एआरएम समायोजन: NA
45 ADAPTER समावेश: हो
ओटो फिर्ता: हो
रेडियो - एफएम: कुनै
रेडियो - AM: कुनै
USB चार्ज गर्दै: कुनै
युएसबी रेकर्डिङ: कुनै
एसडी स्लट: कुनै
एसडी प्लेब्याक: कुनै
एसडी रेकर्डिङ: कुनै
हेडफोन ज्याक: हो
सहायक इनपुट: हो
SPEAKER साइज:23 एक्स "5W 8Ohm
सत्ता ईपीएस: बाह्य
पावर एडप्टर इनपुट: 120V - 240V (50/60 हर्ट्ज)
सत्ता उपभोग: 19 वाटमा
बाराम्बारता दायरा (AM): NA
बाराम्बारता दायरा (एफएम): NA
DIMENSIONS: 18.5 "x13.38" x5.9 "
एकाइ वजनः: 13.82 एलबीएस
प्रमाणपत्र: ICES, एफसीसी प्रमाणित, ETL / CETL
के समावेश गर्नुपर्छ: आर्चर सूटकेस Turntable , 45 रेकर्ड एडप्टर, एसी एडप्टर, निर्देश मैनुअल, 1 वर्ष वारेन्टी, लाइफटाइम ग्राहक समर्थन
Electrohome 100 वर्ष को लागि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरु को अग्रणी निर्माता गरिएको छ। तिनीहरूले जीवनकालमा ग्राहक समर्थन रूपमा आफ्नो ग्राहक सेवा कुनै पनि दोस्रो छ। यो 3-मा-1 सुटकेश turntable ठूलो शैली संग एक डिजाइन छ र पनि कारण यसलाई कसरी पोर्टेबल गर्न मन को एक महान शान्ति दिन्छ।
यो turntable को 1960 का बाट प्रेरित छ। को Electrohome आर्चर विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable तपाईँको आफ्नै moblie उपकरणबाट Vinyl रेकर्ड र तपाईँको आफ्नै संगीत खेल्न सक्षम छ। वैकल्पिक रूपमा, एक हेडफोन ज्याक निजी सुन्न लागि प्रदान गरिएको छ। यो turntable सबै काठ मन्त्री आफ्नो हृदय स्पर्श गर्न सबै भन्दा राम्रो अडियो प्रदर्शन निम्त्याउने यसको fullest संभावित पुग्न स्पिकरहरू निर्मित अनुमति दिन्छ जो संग स्थित छ। वास्तवमा, यो एक न्यानो र थप प्राकृतिक अनुभूति दिन्छ जो एउटा नीलम टिप दिनुभयो माटोको सुई आउँछ।
काले लेपित, यो डिजाइन सुरुचिपूर्ण छ हो र रेट्रो पुराना नजर छ। यो कालो परमवीर चक्र मा समाप्त र प्लास्टिक platter छ गर्नुपर्छ। यो turntable धेरै लामो समय को लागि पछिल्लो गर्न बाध्य छ। सबैभन्दा turntables जस्तै, सबै भन्दा vinyls सजिलै प्ले गर्न सक्षम छन्। यो मोडेल $ 49.91 मा मूल्य र ठूलो चोरी छ।
ठूलो ढक्कन प्ले गर्दा त यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
अगाडि सट्टा पक्षले वक्ता। यसरी multidirections राम्रो ध्वनि दिने।
अगाडि डाटा पोर्ट र बटनहरू छन्।
04 • Crosley CR6019A-BR कार्यकारी Turntable
Crosley अर्को असाधारण मोडेल, यो कुनै पनि अन्य विपरीत एक सुटकेश turntable छ। को Crosley CR6019A-BR कार्यकारी तीन अलग गति मा खेल्न सक्षम छ। यसलाई तपाईँको आफ्नै मोबाइल उपकरण र तपाईंको Windows वा म्याक लागि एक USB पोर्ट कम्प्युटर समर्थित हुनत तपाईं आफ्नो मनपर्ने गीतहरू प्ले गर्न अनुमति दिन्छ एक auxillary केबल हुन्छन्।
पीतल मा र्याप छ सुटकेश हार्डवेयर जलप। खैरो मा लेपित, यो साँच्चै बन्द वास्तविक पुराना अनुभूति दिन्छ। वास्तवमा, यो असाधारण गुणवत्ता को गतिशील पूर्ण-सीमा स्टेरियो स्पिकर आउँछ। को turntable मा स्थापित छ कि टोन हात स्वयं नियन्त्रित छ तापनि, रेकर्ड स्वचालित रूपमा यसको ट्रयाक समाप्त भएपछि बन्द हुनेछ शैली मिलाइएको क्लिक छ।
केवल $ 81,52 मा मूल्य, यो मोडेल हरेक डलर खर्च लायक छ। यसलाई आफ्नो साथी वा परिवारको लागि सही उपहार हो। सुविधाजनक, प्रयोग गर्न सजिलो र एकदमै प्रयोगकर्ता अनुकूल, यो मोडेल निश्चित हाम्रो शीर्ष विकल्प मध्ये एक हो।
युएसबी समारोह मार्फत एमपी -3 फाइल संगीत रेकर्ड गर्न सक्षम।
कुनै पनि शुरुआती लागि ठूलो खेलाडी।
मात्रा उत्पादन अलिकति पनि कम छ।
05 • 1byone बेल्ट-ड्राइभ 3-गति पोर्टेबलस्टेरियो Turntable
बस एउटा अचम्मको चिकना डिजाइन भइरहेको छैन, यो turntable तपाईं एक प्रवेश स्तर turntable खोज्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो आवश्यकता खानपानको प्रबन्ध गर्नु गर्न सबै कुरा छ। एक किफायती र पोर्टेबल turntable खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईं जवाफ 1byone बेल्ट-ड्राइभ 3-गति पोर्टेबल छ स्टेरियो Turntable .
यो तीन अलग गति मा रेकर्ड खेल्न सक्षम छ। साथै, यो एक काठ मन्त्री संग पु छाला संग र्याप एक ब्रिफकेस शैली मिलाइएको turntable रूपमा डिजाइन गरिएको छ। सुरुचिपूर्ण अझै आकस्मिक, यो मोडेल गम्भीर आँखा परिहाल्छ कि छ। सानो andcompact, तपाईं यो कहीं र कुनै पनि बेला भण्डारण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। समग्रमा, यो तपाईंको ध्यान फसाउन एक चिकना अझै अचम्मको डिजाइन दिने।
यो turntable एक नरम दर संयन्त्र एक गतिशील सन्तुलित टोन हात समावेश गर्दछ। यो turntable पनि एक सुधार आवाज गुणस्तर लागि अगाडि सामना वक्ता हुन्छन्। वास्तवमा, यो एक हेडफोन ज्याक भनेर निजी साथै सुन्न अनुमति दिन्छ संग प्रदान गरिएको छ। यो नयाँ vinyls आउँदा यो एक सानो बिट skips Althought, यो मोडेल छ पेशेवरों को राशि यो अप बनाउँछ। यो मोडेल $ 59,99 मूल्य हो।
अचम्मको र सजिलै अप सेट र प्ले देखिन्छ।
सानो र संकुचित।
06 •Victrola Vintage 3-Speed ब्लुटुथ सूटकेस Turntable
उज्ज्वल, हडताली र eyecatching। को Victrola Vintage 3-गति ब्लुटुथ सूटकेस यो संगीत आउँदा Turntable सुविधाहरू ठूलो विविधता छ। यो turntable प्रयोग vinyls, auxillary केबल द्वारा र ब्लुटुथ समारोह मार्फत या त गर्न सक्ने वक्ता बनाइएको पाइन्छ।
सबै आफ्नो सुविधा गर्न खानपानको प्रबन्ध गर्नु छ। तपाईं वर्तमान कुनै vinyls वा कुनै पनि auxillary केबल छ जब ब्लुटुथ समारोह ठूलो छ। तपाईं handedly एकल तपाईं उपकरणबाट कुनै पनि संगीत खेल्न सक्षम हुनुहुन्छ रूपमा। यसलाई साथै निजी सुन्न को लागि एक हेडफोन ज्याक आउँछ।
Victrola देखि मोडेल सकेसम्म रेट्रो रूपमा हेर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चिकना अचम्मको छ र यो एक अमेरिकी डायनर को nostalgic अनुभूति बन्द दिन्छ। सबै सुविधा र यस मोडेल को मूल्य विचार, यो आफ्नो शीर्ष विकल्प मध्ये एक तिमी एक turntable लागि देख यदि गर्नुपर्छ हुनुहुन्छ। यो मोडेल $ 57,15 मूल्य हो।
सिद्ध बेटिकट यात्री साथी र यो धेरै पोर्टेबल छ।
यो मूल्य लागि ठूलो रेकर्ड खेलाडी र वक्ता।
गति असंगत छ।
07 • जेन्सेन पोर्टेबल स्टेरियो Turntable
सादगी यसको उत्कृष्ट मा, जेन्सेन पोर्टेबल स्टेरियो Turntable तीन अलग गति जो अनुमति दिन्छ सबैभन्दा vinyls सजिलै प्ले गर्न मा खेल्न सक्षम छ कि एक बेल्ट संचालित turntable छ। काले डिजाइन, यो साँच्चै त्यो पुरानो रेट्रो सुटकेश अनुभूति छ र यो साँच्चै उत्कृष्ट छ।
के बनाउँछ यस मोडेल बाहिर खडा यो Vinyl यसको ट्रयाक प्ले पूरा गरेपछि यो मूल स्थिति फर्किन टोन हात गराउँछ कि एक संयन्त्र छ भन्ने छ। अचम्मको यो छैन? कि बाहेक, यस turntable सुविधाजनक रेकर्डिङ लागि सबै नयाँ धृष्टता GenericName सफ्टवेयर र अडियो सम्पादन आउँछ। त्यसैले, तपाईंले आफ्नो अडियो सम्पादन गर्न कुनै पनि अतिरिक्त सफ्टवेयर किन्न आवश्यक छैन।
एक पत्थर दुई चरा मार। यो पनि आफ्नो मोबाइल उपकरण जडान सकिन्छ कि auxillary पोर्ट आउँछ र यो अतिरिक्त वक्ता लागि आरसीए पोर्ट छ। एक 120V एसी एडप्टर इष्टतम ध्वनि Perfomance लागि समावेश गरिएको छ रूपमा चिन्ता छैन। Additionaly, यो ठूलो ढक्कन आउँदै देखि धूलो रोक्न प्ले गर्दा। अनि सबै भन्दा राम्रो भाग, यसको मूल्य तल बन्द गर्न सकिन्छ छ। यो मोडेल $ 94,95 मूल्य हो।
यस पक्षलाई वक्ता राम्रो बहु-दिशात्मक ध्वनि दिन।
08 • ION अडियो विनाइल गति डिलक्स | पोर्टेबल 3-गति बेल्ट-ड्राइभ सूटकेस Turntable
अझै ION अर्को मोडेल, यो वर्ग र गुणस्तर निर्माण गरिएको छ। को ION अडियो विनाइल गति डिलक्स एउटा पोर्टेबल 3-गति बेल्ट-ड्राइभ सूटकेस सबै भन्दा राम्रो आवाज गुणस्तर लागि स्पिकरहरू निर्माण गरेको छ कि Turntable छ। तपाईंले आफ्नो turntable सेट अप गर्न कुनै पनि अतिरिक्त वक्ता प्राप्त गर्न आवश्यक छैन हो। कि शानदार छ?
यो turntable को सबै भन्दा राम्रो भागहरु को एक ब्याट्री आनन्दको घन्टा सुनिश्चित गर्न rechargable छ भन्ने छ। यो एक auxillary पोर्ट र एक हेडफोन ज्याक तपाईँको आफ्नै moblie उपकरण र निजी listeningrespectively संगीत प्ले गर्न दुवै छ।
यो turntable प्रविष्टि स्तर खेलाडी प्राप्त गर्न देख गर्नुपर्छ जो कोहीले लागि एक महान मोडेल छ। यो अत्यन्तै सुविधाजनक छ र गर्न सक्छन् सजिलै भण्डारण गर्न। त्यो छैन एउटा पोर्टेबल सुटकेश खेलाडी बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के यो छ? यो मोडेल $ 37.67 मा मूल्य छ र एक आज आफ्नो हात प्राप्त गर्नुपर्छ।
ठूलो आधारभूत प्रवेश स्तर खेलाडी।
सुविधाजनक र सेटिङ भीड मा राम्रो।
आन्तरिक ब्याट्री चार्जर संग सानो पोर्टेबल turntable र स्पिकरहरू बनाए।
09 • Musitrend विनाइलरेकर्ड प्लेयर क्लासिक पोर्टेबल सूटकेस
को Musitrend विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक पोर्टेबल सूटकेस को प्रमुख अंक को एक मात्र 5.8 एलबीएस वजन, हल्का छ भन्ने छ। यो कि सुविधाजनक ढुवानी लागि एउटा सजिलो ह्यान्डल आउँछ एक सुटकेश जस्तै डिजाइन गरिएको छ। यो Musitrend कसरी यो मोडेल त्यसैले हल्का बनाउन सक्षम थियो अचम्मको छ।
यो turntable अविश्वसनीय बहुमुखी छ र यो तपाईँको मोबाइल उपकरणहरूको लागि एक auxillary पोर्ट, निजी सुन्न को लागि एक हेडफोन ज्याक, र अतिरिक्त वक्ता लागि आरसीए उत्पादन आउँछ किनभने यो प्रयोगकर्ता मैत्री छ। तपाईं आवश्यक सबै सुविधाहरू सबै यो मोडेल मा पैक। तपाईं अझै पनि विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै थप हेर्न।
अडियो गुणस्तर कारण यो काठ को बाहिर निर्माण गरिएको छ र यसलाई अझ सुरुचिपूर्ण नजर लागि छाला संग र्याप छ भन्ने तथ्यलाई साँच्चै आश्चर्यजनक छ। रातो भित्र को अलिकति स्पर्श संग, यो पक्कै पनि असाधारण देखिन्छ। यो vinyls एक ठूलो विविधता लागि3अलग गति मा खेल्न सक्षम छ कि भूल छैन। यो मोडेल $ 59,99 मा reasonably मूल्य हो।
युएसबी आउँछ तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा एमपी -3 फाइलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
गति खेल को लामो घण्टा पछि सुस्त हुन सक्छ।
10 • टायलर ब्लुटुथ ब्रिफकेस विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable
तपाईं ठूलो देखिन्छ र ठूलो सुनिन्छ एक turntable चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईं को लागि मोडेल छ। को टायलर ब्लुटुथ ब्रिफकेस विनाइल रेकर्ड प्लेयर क्लासिक Turntable स्थापित एक USB पोर्ट मार्फत Vinyl रेकर्ड र मोबाइल उपकरणहरूमा खेल्न सक्षम छ। वास्तवमा यो एक auxillary इनपुट अनुमति दिन्छ तपाईँको मोबाइल उपकरणबाट प्ले लागि अर्को विकल्प छ।
यो turntable पनि एक हेडफोन ज्याक अनुमति दिन्छ निजी सुन्न पाइन्छन्। यो सुविधा एक्लै केही शान्त समय रुचि र संसारबाट बाहिर zoning ती निश्चित लाभ उठाउन थियो। यो पनि इच्छा कुनै पनि additonal वक्ता लागि आरसीए उत्पादन समावेश गर्दछ। यसलाई साथै तीन अलग गति जो सबै भन्दा vinyls प्ले गर्न अनुमति दिन्छ मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
भित्र मा बाहिर र पहेंलो मा काले डिजाइन, यो एउटा धेरै शिष्ट अनुभूति बन्द दिनुहुन्छ। यसबाहेक, लग जसरी कुरा गर्छन्। यो मोडेल केवल राम्रो देखिन्छ गर्छ तर पनि राम्रो सुनिन्छ। यो मंच मा सानो wobbles हुन सक्छ हुनत, यो निर्मित वक्ता संग निर्माण र इष्टतम अडियो Perfomance लागि काठ मन्त्री संग स्थित छ। यसरी यो मोडेल कुनै पनि लगभग दोस्रो छ। यो मोडेल $ 89,95 मूल्य हो।
मित्र र परिवारका लागि ठूलो उपहार।
मञ्चमा सानो wobbles।